महानायक बच्चनलाई के भएको हो ? उनीसँग ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले गरे यस्तो खुलासा – Khabar Silo
मुम्बई । अमिताभ बच्चनलाई विगत तीन दिनदेखि मुम्बईको नानावटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको खबर एउटा अफवाह साबित भएको छ। बिहीबार बेलुका एउटा अंग्रेजी वेबसाइटले बिग बी कलेजोको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएको दाबी गरेको थियो । यद्यपि दैनिक भास्करले अनुसन्धान गर्दा यो गलत साबित भयो । विगत ४० बर्षदेखि अमिताभको मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंतले उक्त समाचारलाई केवल अफवाह मात्र भनेका छन् ।
बच्चन साहेब नियमित जाँचको लागि अस्पताल जानुहुन्छ । उनको प्रवेशको समाचार रिपोर्ट गरेको वेबसाइटले अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको छ । त्यो वेबसाइटको विश्वसनीयता पहिले नै शंकास्पद रहेको छ । त्यसले अपूर्ण समाचार दियो । रुटिन चेकअप भ्रमणहरू बढाइचढाइ गरिएको थियो र अस्पतालमा भर्ना हुने समाचार आयो । यो केहि पनि होइन । बिग बी को उमेर को कारण, उहाँ नियमित जाँचको लागि जानु पर्छ । यो सामान्य छ ।
दीपक अझै भन्छन्, ‘वास्तवमा उहाँसँग ‘केबीसी ११’ को लागी तीन ायगच चार दिन कुनै शूट थिएन। हामीलाई पनि डिस्चार्ज गरियो। बिग बीको सेटबाट अनुपस्थित भए पछि अस्पतालमा भर्ना हुन भनियो। उनले ुकेबीसीु को शूटिंग पूरा गर्नेछन् र त्यसको लगत्तै फिल्म ‘चेहरे’ को स्क्रू काम पूरा गर्नेछन् । फेरि रणवीर कपूर र आलिया भट्टसँग आउटडोरका लागि ुब्रह्मास्त्रु को शूटिंगका लागि पनि जाने जनाइएको छ । यदि कोही बिरामी छ भने ऊ किन बाहिर जान्छ होला ?’
महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, ुकुलीु को सेटमा दुर्घटना भएदेखि अमिताभ बच्चन कलेजोमा समस्या छ । उनको कलेजो ७५ प्रतिशत बिग्रिएको छ । उनको कलेजोको २५ प्रतिशतमा जीवित छ । वास्तवमा, मुम्बईको ब्रेच क्यान्डी अस्पतालमा भएको दुर्घटना पछि, जब बिग बीको अवस्था नाजुक थियो, उनको लागि करिब २०० दाताहरूबाट ६० बोतल रगत संकलन गरिएको थियो । यस समयमा त्यहाँ एक लापरवाही पनि थियो । बिग बीलाई हेपाटाइटिस–बी संक्रमित व्यक्तिलाई रगत चढाइएको थियो । यसले उनको शरीरमा संक्रमण भयो, जसले कलेजो सिरोसिस गरायो ।
दीपक सावंतका अनुसार अमिताभ बच्चनले आफूलाई अनुशासित दिनचर्या, खाना र जीवनशैलीका साथ फिट राखेका छन् । यो ुकुलीु (१९८३) को सेटमा भएको घटना पछि भएको हो । दीपकले भने, ‘उनी आफैं यति शारीरिक रुपमा फिट छन् कि घण्टौं काम गरेर पनि ऊ थाक्दैन । उनले नन–वेज (शाहकारी) छोडेका छन । उनी रक्सी, सिगरेट पनि छुदैनन् । त्यसपछि उनले एउटा निर्णय लिए र आज सम्म उनी त्यसमा कायम छन् । उनले चिसो पानी पिउँदैनन् । उनी थोरै थोरै चिया, कफी पनि लिन्छन् ।’
काठमाडौँ । हत्केला शरिरको संवेदनशील अंगमध्ये एक हो। यो सबै भन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अंग हो। त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्छ। हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतायसँग पनि जोडिएको पाइन्छ। हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन। हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको […]
क्यान्सरका बारेमा एउटै धारणा के छ भने क्यान्सर पूर्ण रुपले निर्मूल पार्न सकिँदैन । तर, चिकित्सकहरुका अनुसार यदि सुरुवाती चरणमा क्यान्सरको संकेत थाहा पाउने हो भने यसको उपचार सम्भव छ । यस्तै केही संकेत जुन पुरुषमा देखिन्छ । १. पिसाबमा समस्या – छिटो–छिटो पिसाब लाग्नु, पिसाब गर्दा दुख्नु, पोल्नु, पिसाब रोक्न गाह्रो हुनु यो प्रोस्टेड […]